Ifama yaseSão José - I-Airbnb
Ifama yaseSão José
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguClaudia
Yiza uzonwabele nosapho kunye nabahlobo bakho uxolo kunye nokuzola kwelali kwindlu yethu yasemaphandleni epholileyo (ikomkhulu) yefama yaseSão José.Sinendawo enkulu enebarbecue, igumbi lemidlalo kunye nedama lokuqubha.
Ifama ineegusha, amahashe kunye nezinye izilwanyana naye nabani na ofuna ukwazi. Sikufuphi nomlambo iSanto Inácio kwaye sinedama labo bathanda ukuloba...
Kukho iChapel entle.
Iindwendwe zinokonwabela yonke indawo enxulumene nekomkhulu, ebandakanya indlu enendawo yokuhlala yokulala ukuya kuthi ga kwi-16 abantu okanye ngaphezulu, igumbi lemidlalo, i-swimming pool kunye ne-barbecue, i-lawn enhle eyenziwe ngamaplanga.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
4.96 · Izimvo eziyi-113
Lo mhlaba uli-10 km kude kwindlela yomhlaba esuka kwisikhululo segesi saseGraal Maristela kunye nevenkile yokutyela iCamponesa eku-km 198 kuhola wendlela iCastelo Branco.
Ngeentsuku ezinethayo olu hambo lunokuthatha ixesha elide ngenxa yemingxuma namadili amanzi.
Eyona dolophu ikufutshane yokuthenga yiPardinho kwaye ikumgama oziikhilomitha ezingama-27 xa iyonke, kodwa kukho ivenkile yegrosari emva kweposi yaseMaristela.
Thina kufutshane amatye 3 wefama Bofete, Gigante Deitado, e Pardinho kunye iindawo ezimangalisayo ukutyelela ezifana Tirolesa ntoni Gigante, Café Cuesta and Bar wenze Vivan kunye Botucatu ezineengxangxasi eziliqela kunye neembono ezimangalisayo ezifana Pedra ntoni indio, Fazenda Lageado phakathi abanye.
A casa da fazenda é rústica e aconchegante que meu avô construiu com muito carinho. Temos muitas lembranças de família. Adoramos receber hóspedes e ver a casa com vida...
Iindwendwe zinokuzenza zikhululeke kwindawo ejikeleze ikomkhulu (indlu, iphuli, igumbi lemidlalo kunye nebarbecue) kwaye nanini na xa ziyifuna, siya kuba nomntu oza kusinceda.
Ixesha lokuphuma lingo:19:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bofete